शकुन्तला | samakalinsahitya.com
यस्ता क्रमहरु एक,दुई वर्ष लम्बिए..... ।
निर्णय गरेको हप्तादिन नबित्दै शकुन्तलाकै कोठामा झकसि‘ंह भन्ने एक बिवाहित केटोलाई आपत्तिजनक अवस्थामा पक्रन सफल भए– गाउ‘ंलेहरु । दुबैलाई सार्वजनिक चौतारोमा ल्याएर केरकार गर्ने क्रममा सयौं मानिसहरू एकत्रित हुन पुगे । झकसिंहकी पत्नी जमुनाचाहि‘ं ’ मेरो लोग्नेले यस्तो गल्ती गरेको हु‘ंदै होइन । उनीस‘ंग यौन चाहना कति प्रबल छ भन्ने कुरा तपाइ‘ंहरू मलाई हेरेर बुझ्नुस् । आजसम्म मेरो कोख उनले भर्न सकेका छैनन् । पुरुषत्व नभएको व्यक्तिलाई यस्तो लाञ्छना किन लगाएका होलान् प्रभु ! वेश्याले जालमा फसाई मेरो सोझो लोग्नेलाई....! भन्दै रु‘ंदै चिच्चाउन थाली । तर उनका शब्दहरूले उदाङ्ग बनाएको यथार्यलाई कसैले बुझ्न चाहेनन् । सारा गाउ‘ंलेहरू झकसिंहको विपक्षमा एक भए । घटनाको गहिराई पत्ता लगाउने क्रममा सर्जमिन भयो । अन्ततः सबैले शकुन्तलालाई दोश्रो पत्नीका रुपमा स्वीकार्न झकसिंहलाई वाध्य बनाए ।
–“के गर्नु म पनि सासुआमाको सेवा गर्न तपाईंसितै जान्थें । दुई,तीनदिनदेखि खुट्टा फत्रक्क गलेर चार पाइला हि‘ंड्ने ऑंट समेत आ’छैन । जे होस्,तपाईं जानु भएपछि बा’लाई राम्ररी ठीक पारेर मात्र आउनुस् । यहॉं मेरो कुनै पीर लिनु पर्दैन ।” भन्दै ।
भोलिपल्ट बिहानै एकजोर लगाउने लुगा झोलामा हालेर गाउ‘ं जाने बहानामा निस्क्यो ऊ ।
शकुन्तला आफ्नो सुन्दर कल्पना साकार हुने सपना देख्न थाली ।
–“क्या कुरा गर्नु भा’को सापले ? हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने मेरो साथ जाउ‘ंm न ! म देखाई दिन्छु लङ्का जलाउने हनुमानको चर्तिकला । ”
–“डेरा त मेरो बालाजुमा छ हजुर । घरपति आमाको नाउ‘ं त थाहा छैन साप ! सबैकुरा ठाउ‘ंमा पुगेपछि था’भैहाल्छ । अहिले नै जाउ‘ं हजुर मेरो डेरामा ..... । ” भन्दै ढिपी गर्न थाल्यो– झकसि‘ंह ।
–	पोखरामा तपाइ‘ंको घर कत्रो छ ?
–	जग्गा जमिन कति छ ?
–	सायय बिवाह गरिसक्नु भएको छ होला !
–	तपाइ‘ंलाई म कस्ती लाग्छ ?
–	अब कति समय काठमाडौ‘ं बस्नु हुन्छ ?
–	ढुङ्गाको छानो भएको ठूलो छ घर । काठमाडौ‘ंको बंगलाभन्दा राम्रो छ ।
–	सय मुरी धान फल्ने खेत छ । चार–पॉंच रोपनी बारी छ ।
–	किन ढॉंट्नु तपाइ‘ंलाई ? अब पढाई सकिन लाग्यो । त्यसपछि बिहे गर्ने....।
–	स्वर्गकी अप्सराजस्तै पो लाग्छ ।
–	अब आठ,नौं महिनामा पढाई सकिन्छ । त्यसपछि किन बस्नु यहॉं ?
– यस्ती राम्री आइमाइले पनि त्यस्तो ज्यामी काम गरेर हि‘ंड्ने झुत्रेलाई लोग्ने भनेर कसरी बस्न सकेको होला ?
– काठमाडौंमा कस्ताकस्ता धनाढ्य व्यक्तिले पनि तपाइ‘ंजस्ती राम्री स्वानी पाएका छैनन् ।
– बरु सक्नुहुन्छ भने त्यो झुत्रेलाई छाडिदिनोस् । तपाइ‘ंलाई मै राम्ररी खान लाउन दिएर पालू‘ंला । भन्दै ।
“तपाईंले ऑंट्नु हुन्छ भने म त्यो झुत्रेलाई छाडिहाल्छु नि ! कुन ठूलो कुरा हो र त्यो ?” भन्दै शकुन्तला मदनको चाहनालाई पुर्णसमर्थन मात्र के गर्दै थिई, ढोकामा टक्...टक् आवाज आयो ।
ठिङ्ग उभिएको झकसि‘ंह र पछाडि पुलिस इन्सपेक्टरसहित प्रहरी जवानहरू देख्नासाथ निलोकालो मुख लगाएर “ए .... तपाईं गाउ‘ं जाने भन्नु भा’ को हैन ? फेरि ..... ।” भन्दै आश्चर्य के पोख्दै थिई शकुन्तलाले “त‘ं चूप लाग् रण्डी ! मस‘ंग बोल्न लाज लाग्दैन ? यसको नाठो कोठाभित्रै हुनुपर्छ इन्सपेक्टर साप !” भन्दै झकसि‘ंह जोस्सियो ।
–“तपाईं ठूलो स्वरले नकराउनुस्” भन्दै इन्सपेक्टरले कोठामा खानतलासी लिन लगायो ।
–“कागज पनि भै’हाल्छ नआत्तिनोस्” भन्दै इन्सपेक्टरले मदनको बयान पुनः लिन थाले । पॉंच महिनादेखि दुबैजना प्रेममा फसेको निष्कर्ष निक्ल्यो । बयानको क्रममा शकुन्तलाले पनि मदनसंगै जीवन बिताउने आफ्नो निर्णय सुनाई । दुबै पक्षका सहमतिमा कागजात बन्यो ।
अर्काले भन्यो – “ हो .... त्यो त गर्नु नै पर्छ । आपूmले गरेको धर्म खेर जॉंदैन क्यारे । ”
धर्मप्रति विश्वास भएका प्रायः व्यक्तिहरूले बुढाहरुका कुरालाई समर्थन गरे । आपूmले गरेको गल्तीप्रति सबैस‘ंग क्षमा माग्दै झकसि‘ंह आफ्नो घरतिर लाग्यो । छोराको अनुपस्थितिले शिथिल बनेकी बुढी आमा र अथाह पीडा बोकेर थाकिसकेकी पतिव्रता जमुनाले उसको आगमनलाई तातो ऑंसुका धाराहरू बर्साउ‘ंदै स्वागत गरे । अस्तु